Deepak Dahal, Author at Changing Nepal
Author Archives: Deepak Dahal
in Uncategorized by Deepak Dahal
महाभारतको उद्योग पर्वमा भनिए अनुसार श्रीकृष्णलाई अर्जुनका केही कुरा साह्रै राम्रो लाग्थ्यो, जसका कारण अर्जुनले सदैव विजय हासिल गरे । अर्जुनका ती गुणहरूकै कारण श्रीकृष्णले महाभारत युद्धका क्रममा अर्जुनको साथ दिएका थिए ।
अर्जुनको स्वभावका यी कुरा सिकेर कुनै पनि मानिस राम्रो लीडर बन्न सक्छ । यी कुरालाई आत्मसात् गरेर दैनिक जीवनमा वा आफ्नो स्वभावमा सामेल गर्नाले मेहनतको पूर्ण फल मिल्नुका साथै हरेक काममा सफलता हात लाग्छ ।
के थिए त अर्जुनका गुण
अर्जुनसमान श्रेष्ठ धर्नुधर अरू कोही थिएन । अर्जुन जति फुर्तिले बाण चलाउँथे त्यति कसैले सक्दैनथ्यो, उनको जस्तो स्फूर्ति अरू कसैको हातमा थिएन । अर्जुनको यही गुणले उनलाई सर्वश्रेष्ठ धर्नुधारी बनाएको थियो । यसै गरी कुनै पनि कामलाई सही अवसरमा समय नगुमाईकन पूरा गर्ने कोशिश गर्नुपर्छ । यसबाट सफलताको सम्भावना वृद्धि हुन्छ ।
महाभारतमा यस्ता थुप्रै कथा छन्, जसले अर्जुनको बल र बुद्धि दर्शाउँ छन्। अर्जुनमा शारीरिक बलका साथ-साथै मानसिक शक्ति पनि निकै थियो । यसै कारण वजह उनी चलाखिपूर्ण नीति निर्माण गरेर दुश्मनहरूलाई जित्दथे। त्यसैगरी हामीले पनि कुनै काम गर्दा बुद्धि पूर्वक योजना बनाएर गर्नुपर्छ। जसबाट निश्चित सफलता प्राप्त हुन्छ।
भनिन्छ, हरेक काम गर्ने एक सही समय हुन्छ, यदि हामीले कुनै कुरामा निर्णय लिन ढिलाइ गर्यौं भने त्यसको अर्थ नरहनसक्छ । यो कुराको महत्व अर्जुनलाई राम्रोसँग थाहा थियो । उनी कुनै पनि काम गर्न त्यति बेर लगाउँदैनथे ताकि त्यस कामको महत्त्व नै सकियोस् । श्रीकृष्ण आफ्नो नीति सबै पाण्डवलाई बताउँथे तर त्यसलाई बुझेर सबैभन्दा पहिले लागू गर्ने अर्जुन नै हुन्थे । यसै गरी हामीले पनि कुनै मौका गुमाउनुहुँदैन । समयको महत्व बुझेर काम गर्नुपर्छ ।
श्रीकृष्ण स्वयंले गीता उपदेशमा अर्जुनलाई मोहमाया छाडेर आफ्नो कर्मलाई महत्व दिनुपर्छ भनेर सिकाएका थिए । त्यसपछि अर्जुनमा विषादहीनता वा कुनै पनि कुराले दुखी नहुने गुण विकसित भएको थियो । फलत: युद्धमा अर्जुन कुनै परिस्थितिमा विचलित भएका थिएनन् । उनी आफ्नो कर्म गर्दै रहे। यसैगरी हामीले पनि सुख, दुखभन्दा माथि उठेर, आलस्य छोडेर आफ्नो काम पूरै मन लगाएर गर्नुपर्छ ।
भगवान कृष्णका अनुसार, जुन मनुष्यमा धैर्य हुन्छ, ऊ स्वत: महान बन्छ । अर्जुन बुद्धिमान तथा शक्तिशाली हुनुका साथ-साथै धैर्यवान् पनि थिए । अर्जुनको जस्तो धैर्य जुन मानिसमा हुन्छ ऊ कुनै पनि काम हतारमा गर्दैन । धैर्यपूर्वक काम गर्दा बुद्धि भ्रमित हुँदैन र अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुन्छ ।
पराक्रम अर्थात हरेक काम गर्ने क्षमता। महाभारतमा केवल अर्जुन नै यस्ता थिए, जो कुनै पनि चुनौती वा समस्याको सामना गर्न डराउँदैनथे । यसै गरी हामी पनि हरेक काम यसरी नै पूरा गर्नका लागि पराक्रमी हुनुपर्छ । अर्जुनले जस्तै गरी हामीले पनि पराक्रम देखाएर हर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ ।
बुद्धि र पराक्रमका साथसाथै अर्जुनको व्यक्तित्व पनि प्रभावशाली थियो । नियम एवं संयममा बस्ने भएका कारण अर्जुनको तेज अति नै प्रभावशाली थियो। यसै गरी हामीले पनि नियम र संयम पालन गर्नुपर्छ जसबाट हाम्रो तेज बढोस् र व्यक्तित्व पनि प्रभावशाली बनोस्।
in motivational by Deepak Dahal
सफल हुन नचाहने कोही छ ? पक्कै छैन। उसो भए सफलताका लागि के कस्ता कुरा आवश्यक पर्छन् त ? हेरौँ,
सपना देख्ने हिम्मत
धेरैले भन्ने गर्छन्, ठूलो मान्छे बन्ने सपना देख्न छोड। सरकारी जागिर खान प्रयास गर, नभए अन्य कुनै राम्रो जागिर खाएर जीवन सुख सन्तोष पूर्वक बाँच।
तैंले गर्छस् व्यापार ! खुरुक्क जागिर खोजेर खा। नभा पैसा लगानी गरेर डुबाउनलाई अनेक थरि झन्झटमा नफस्।
तैंले लाखौँ कमाउने, हावा कुरा नगर्। फाल्तु सपना देख्न छोड्। दिमाग सड्केला।
यसरी सपना देख्न समेत बन्देज लगाउन खोज्ने मानिसको कमी छैन समाजमा। तर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने सपना कहिल्यै फाल्तु हुँदैन।
तसर्थ अरूको कुरा नसुनी केवल आफ्नो सपना पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि दिनरात एक गर्नुपर्छ। नकारात्मक कुरा गर्नेहरू बाट टाढा रहनुपर्छ। अरूले देख्दा पागल भएर काममा लागेको देखिए पनि आफ्नो सपना पूरा गर्न हिंडेको मानिस आफ्नै धुनमा मग्न भैरहेको हुन्छ।
वाल्ट डिज्नीको नाम त धेरैले सुनेको हुनुपर्छ, उनी भन्ने गर्थे- ‘तपाईंले कुनै चीजको सपना देख्नुभयो भने त्यसलाई हासिल गर्न पनि सक्नुहुन्छ।’
अधिकांश व्यक्ति एउटै गोरेटोमा हिंड्न वा लकीरको फ़क़ीर बनिरहनमै मजा मान्छन्। उनीहरू आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन चाहँदैनन्। यहाँ नेर याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने सफल हुन चाहने व्यक्तिले सपना देख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। जोखिम मोल्न डराउनु हुँदैन। जो जोखिम उठाउन नडराई सपना पूरा गर्न अघि सर्छ उही नै विजेता बन्दछ। भारतका प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलामले भनेका छन्- सपना त्यो होइन जुन राति निदाएका बेला देखिन्छ बरु त्यो हो जसले हामीलाई निदाउन दिदैन।
सफल व्यक्तिसँग प्रष्ट उद्देश्य हुन्छ। उनीहरूलाई आफू केही वर्षपछि कुन स्थितिमा वा कहाँ पुग्छु भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुन्छ।
आफ्नो आँखा बन्द गरिहेरौँ, के आफ्नो जीवनको तस्बिर प्रष्ट आइरहेको छ ? आँखा बन्द गर्दा पनि आफ्नो उद्देश्यलाई प्रष्ट देखिन्छ भने राम्रो, होइन भने आफ्नो लक्ष्य तय गर्नु आवश्यक छ ।
सफलताका लागि निर्विकल्प मेहनत
मेहनतको कुनै विकल्प छैन । कुनै सफल व्यक्तिलाई हेरेर कति भाग्यमानी, भाग्यले पनि कति साथ दिएको भनेर सोच्नु नादानी हो, भाग्यले सफल बनाउँछ भनी सोच्नु गल्ती हो। यो भाग्य, उक्त व्यक्तिले कडा मेहनतद्वारा निर्माण गरेको हो। सफल व्यक्तिका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने मनैदेखि कडा मेहनत गरिन्छ र आफ्नो काममा शत प्रतिशत लागिन्छ भने भाग्यको जरूरत नै पर्दैन। सदैव याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने सफल मानिस आफ्नो भाग्य आफैँ निर्माण गर्छन्।
स्टीव जॉब्सको सफलताको सबभन्दा ठूलो रहस्य तथा विफल नहुनुका पछाडिको एक मात्र प्रेरणा थियो, मृत्युको डर। हामी सबैले एक दिन यो संसार छोडेर जानै पर्छ, यो नकारात्मक नभई ध्रुवसत्य कुरा हो, जीवनको कटु सत्य हो । यदि जानु नै छ भने जे गर्नु छ त्यो नगरी कसरी जाने ? सफल वा विफल हुनु भनेको त पछिको कुरा, कामचाहिँ गर्नुपर्यो। सफलता हासिल गर्ने हो भने आफूभित्र विफल हुनसक्ने तागत हुनुपर्छ। कुनै पनि कन्डिसनमा हार मान्नु हुँदैन। एउतै काम के गर्नु पर्छ भने विफलताबाट सिक्दै अघि बढिरहनुपर्छ। आफ्नो गल्तीहरूबाट सिकेर तिनलाई सुधार्दै सफलताको कथा लेख्नुपर्छ। जब विफलताको डर पछि हट्छ अनि मानिसको कदम स्वत: अघि बढ्छ।
कामप्रति पूर्ण लगाव
सफल मानिस जुनसुकै काम गर्छन्, प्रेमपूर्वक गर्छन्। आफ्नो कामप्रति गरिने प्रेमले सफल हुन सघाउँछ। आफ्नो जीवनका लागि गरिने काममा यति मग्न हुन्छन् कि कतिपय अवस्थामा परिवार तथा प्रेमिकालाई समेत समय दिन भ्याउँदैनन्। यद्यपि एक सफल व्यक्ति आफूलाई चाहनेहरूको हमेशा ख्याल राख्छन्। उनीहरूमा आफ्नो परिवार, काम तथा जीवनप्रति तीव्र लगाव हुन्छ। कामप्रति पूर्ण लगाव छ भने उदास हुनुपर्ने स्थितिसमेत टर्छ। पूरा मेहनतका साथ अघि बढ्दा जीवनरूपी युद्ध सहजै जित्न सकिन्छ।
हामीले सफल मानिसलाई हेर्ने हो भने सबैजसोमा उस्तै कुरो पाउँछौँ, उनीहरू यस्तो निर्णय गर्छन् वा यस्तो कदम उठाउँछन् कि त्यसबाट सहजै लक्ष्यसम्म पुग्ने मार्ग बन्छ। साँच्चै सफलता हासिल गर्ने चाहना छ भने त्यस्ता सबै कुराबाट टाढा रहनुपर्छ जसले लक्ष्यबाट ध्यान भड्काउँछन्, मार्गबाट विचलित पार्छन्। जबसम्म आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सकिंदैन तबसम्म कहिल्यै लक्ष्य हासिल गर्न सकिंदैन। एक लक्ष्य बनाइसकेपछि कुनै बहाना बनाउनु हुँदैन। कतिपय अवस्थामा एकैपटक धेरै काममा हात हालिन्छ अनि त्यसलाई एउटालाई बीचमा छोड्दै अर्को गर्दै गरिन्छ, यस्तो गरेर कहिल्यै कामको पार लगाउन सकिंदैन। एउटा काम समातिसकेपछि त्यसबाट इच्छित सफलता हासिल नहुन्जेलसम्म छोड्नु हुँदैन। सफलता हात नलागुन्जेल मनलाई लक्ष्यबाट दायाँ बायाँ लाग्न दिनु हुँदैन। लक्ष्यमा पुगेपछि मात्र सास लिनुपर्छ।
मैले कहिल्यै सफलता हासिल गर्न सक्दिन भन्ने सोच्नुभयो भने पक्का मान्नुस् तपाईं कहिल्यै पनि सफल हुन सक्नुहुन्न। तसर्थ सकारात्मक बन्नुस्, सकारात्मक सोचले मानिसभित्र त्यस्तो विश्वास पैदा गर्छ जसले उसलाई लक्ष्यसम्म पुग्न कुनै न कुनै बाटो देखाउँछ। एक त्यस्तो बाटो, जो अनेक समस्या र कठिनाइले भरिएको नै किन नहोस् एक सकारात्मक व्यक्तिले त्यसलाई आफ्नो सकारात्मक दृष्टिबाट धेरै हदसम्म सहज बनाइदिन्छ र अन्तमा ऊ सफल पनि हुन्छ। आफ्नो मस्तिष्कमा नकारात्मक विचारलाई स्थान दिनु भनेको आफैँ आफ्नो दुस्मन बन्नु हो। किनभने यसबाट ‘यो त सम्भव छैन, यस्तो त हुने सक्दैन’ जस्ता कुरामा मन रुमल्लिने हुँदा काममा केन्द्रित हुन सकिंदैन। सफलता प्राप्त गर्ने तीव्र चाहना छ भने साथी, बी पोजेटिभ ! सकारात्मकताको बलमा जीवनमा चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसबाहेक केवल आवश्यक छ : धैर्य र मेहनत।
तपाईंलाई कसैले रोक्न अनि छेक्न सक्दैन, कसैले हराउन सक्दैन। तर यसका लागि तपाईं लड्न तयार हुनुपर्छ। आफूलाई जाँच्नका लागि जब तपाईं आफैँसँग लड्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईंलाई कसले रोक्न सक्छ !
लड्नुको अर्थ कसैसँग मारपिट गर्नु होइन, लड्नुको अर्थ हो संघर्ष। जबसम्म तपाईंको सास चल्छ तबसम्म तपाईंले संघर्ष गर्नुपर्छ। यो संसारमा कुनै पनि त्यस्ता मानिस छैनन् जसले सफल भएपछि संघर्ष नगर्न छोडेको होस्। । बिल गेट्स जो Microsoft का संस्थापक हुन्, उनले सफल भएपछि पनि आफ्नो संघर्ष जारी नै राखे।
यसै कारण उनले Window मा यति धेरै update संभव गराउन सके। त्यसैले त मानिसले Window XP देखि indow 10 सम्म प्रयोग गर्न पाएका छन् जुन उनकै संघर्षको नतीजा हो। यो संसारमा जति पनि मानिस सफल भएका छन् तिनले आफैँ मेहनत गरेका छन्, खूब संघर्ष गरेका छन्। बिना स्ट्रगल कसैले पनि ठूलो लक्ष्य छुन सकेका छैनन्। र जसलाई हामी सफल भनिरहेका छौँ उनीहरू पनि आजसम्म संघर्ष गरिरहेकै छन्, आफ्नो क्षमता र सफलता बढाइरहेकै छन्।
उनीहरू हरेक दिन आफ्नो नकारात्मक विचारसँग लडिरहेका छन्, त्यसलाई सिद्ध्याइरहेका छन्, आफैँलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि लडिरहेका छन्, उनीहरू त्यस्ता सबै कुरासँग लडिरहेका छन् जसले उनीहरूलाई आफ्नो लक्ष्यबाट भड्काइरहेका छन्। तपाईं पनि लड्नुस्, आफूभित्रको आलस्य सिध्याउनुहोस्, आफूभित्रको ती सबै खराब कुराहरूलाई सिध्याउनुहोस् जो तपाईंको सफलतामा बाधक छन्।
संघर्ष गर्न कहिल्यै झिंझो नमानौँ किनभने संघर्ष र सफलताको नाता निकै पुरानो छ।
स्वयंलाई मोटिभेट राख्ने
बिना मोटिवेशन कोही पनि अघि बढ्न सक्दैन । कतिपय अवस्थामा तपाईं निराश पनि हुन सक्नुहुन्छ, जब तपाईं असफल हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा तपाईंको हौसला टुट्छ। यो मैले नकारात्मक कुरा सुनाउन खोजेको होइन सच्चाइ बताएको मात्र हुँ। यो कुरो धेरै सफल मानिसको जीवनमा घटित भएको छ।
हरेक सफल हुनेहरू बारम्बार गिर्छन् तर बारम्बार उठ्छन् पनि। यसर्थ सेल्फ मोटिवेशन अत्यन्त जरूरी छ ।
जब म निराश हुन्छु, साह्रै हैरान हुन्छु, त्यतिखेर एकान्तमा गएर मज्जाले रुन्छु, आफूभित्र जति पनि निराशा छ अथवा जति पनि नराम्रो महसूस गरिरहेको हुन्छु ती सबै आँसुसँगै बाहिर निस्कन्छ। थाहा छैन किन यसो गर्छु तर जब म आफूलाई कमजोर महसूस गर्छु वा मलाई कुनै मोटिवेशन जरूरत पर्छ त्यतिखेर आफैँसँग कुरा गर्दै रुन्छु। अरूलाई यो बेवकूफी लाग्नसक्छ तर हामी आआफ्नो तरिकाले आफूलाई बलियो बनाउन वा आफू भित्र बढी शक्ति पैदा गर्न सक्छौँ। तर यसका लागि रुनैपर्छ भन्ने होइन। धेरै मानिस घन्टौं ऐना अगाडि उभिएर आफैँसँग कुरा गर्छन्। यसरी आफैँसँग कुरा गर्नु, आफैँसँग समस्या बाँड्नु र आफैँसँग समस्या एवं निराशाको जवाफ माग्नु मोटिवेशनको एक ठूलो रहस्य हुनसक्छ।
तसर्थ मित्र ! आफूभित्रको आगो निभ्न नदिनुहोस् किनभने यही आगोले तपाईंलाई अगाडि लैजान मदत गर्छ ।
विपरीतभन्दा विपरीत परिस्थितिमा पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन, ठूल्ठूला समस्या आउन सक्छन् तर हरेक समस्याले आफूसँग समाधान तथा उक्त समस्यासँग जोडिएको ठूलो शिक्षा दिएर जान्छ। र तपाईंले कुनै अर्को व्यक्तिसँग सिक्नुपर्दैन बरु आफूले आफ्नै जीवनसँग सिकिरहनुभएको हुन्छ। र सबैभन्दा ठूलो कुरो यो दिगो पनि हुन्छ।
तपाईं आफ्नो मोटिवेशनलाई कहिल्यै मर्न नदिनुहोस्, जति सम्भव हुन्छ आफूलाई charged राख्नुस् किनभने बिना मोटिवेशन एक-एक कदम अघि बढ्नु कठिन हुन्छ। याद राख्नुपर्ने कुरा के भने हरेक कदममा तपाईंलाई आफैँबाट मोटिवेशन मिल्छ तर शर्त के छ भने पाइला रोकिनु हुँदैन। लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने पाइला अघि सार्नुको विकल्प छैन। पाइला अगाडि बढाउनै पर्छ।
काम सार्ने बानीबाट बच्ने
धेरैमा हुने एक खराब बानी हो काम पर सार्ने। एकछिनपछि गरुला नि के बितेको छ र भन्दाभन्दै दिन, हप्ता, महिना अनि वर्षौं बितेको समेत पत्तो हुँदैन। यस्तो बानी लागेपछि त्यसले जीवनभर छोड्दैन।
तपाईं पनि यस्तो खराब बानीको सिकार हुनुहुन्छ भने याद राख्नुस्, तपाईले जीवनमा कहिल्यै ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न।
काम सानो होस् वा ठूलो भरे गरुँला, भोलि गरुँला भनेर पर सार्ने बानीले जीवनमा गोल घेरामा घुमाइराख्छ र लक्ष्यबाट भड्काउने काम गर्छ।